यी हुन् जान्नै पर्ने बेसारका अद्भुत फाइदा ! | सुदुरपश्चिम खबर
यी हुन् जान्नै पर्ने बेसारका अद्भुत फाइदा !
भान्सामानभई नहुने मसला बेसार स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै उपयोगी मानिन्छ । यो मध्यपूर्व र दक्षिणपूर्वी एशियामाहजारौं वर्षदेखि प्रयोगमाआएको विश्वास गरिन्छ । आयुर्वेद र चिनियाऔषधि विज्ञानमा बेसार संक्रमण स्वस्थपार्न र शरीरभित्रतथाबाहिरको जलननिको पार्न प्रयोग हुँदैं आएको पाइन्छ । आयुर्वेदमा त यो सबैभन्दाउपयोगीप्राकृतिक एन्टिबायोटिक मानिन्छ । तर पश्चिमी देशमा केहीदशकयतामात्र बेसारको उपयोगिताबारे थाहाभएको हो । यसकाफाइदाहरूनिम्न छन् ः
क्यान्सर निको पार्छ : बेसारमापाइने सर्कुमिननामकमुख्यतत्वले टाउको र घाँटीमा क्यान्सर वृद्धि गर्ने इन्जाइमलाई रोक्छ । यो अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा गरिएको अध्ययनबाट प्रमाणित भएको हो । शक्तिशाली एन्टिअक्सिडेन्टः युनिभर्सिटी अफ मेरिल्याण्डमा गरिएको अध्ययनमा बेसारमाशक्तिशाली एन्टिअक्सिडेन्ट तत्व हुन्छ, जसले क्यान्सर गराउने तत्वबाट लड्न मद्धत गर्छ । यसका साथै अन्य धेरै अध्ययनहरूले बेसारमापाइने सर्कुमिनतत्वले प्रोस्टेट, छाला र कोलोनलगायतकाअन्यविभिन्नखाले क्यान्सर हुनबाट समेत रोक्छ ।
रोगप्रतिरोधीः बेसारमालिपोपोलिसेच्चाराइड नामकतत्व हुन्छ । यसले शरीरको रोगप्रतिरोधीक्षमतालाई अझमजबुत बनाउछ । शरीरमा ब्याक्टेरियाको समस्याबाट पनि बचाउँछ । फंगलइन्फेक्सनबाट पनिबचाउने गुण यसमा हुन्छ । शारीरिक सौन्दर्यमाः बेसारको प्रयोग स्वास्थ्यका दृष्टिले मात्रनभई शारीरिक सौन्दर्यका हिसाबले पनिगरिन्छ । यसले अनुहारमाअनावश्यकपत्रजम्नदिँदैंन र बढ्दो उमेरको प्रभाव रोक्छ । यसकालागितीनचम्चा बेसनमा एक चौथाई बेसार र पानीमिसार पेष्ट बनाउनुपर्छ । अनुहारमालगाएर सुक्न दिएपछि मनतातो पानीले हल्कामसाजगर्दै धुनुपर्छ ।
चाउरीमाः काचो दुध, गोलभेंडाको रस, चामलको पिठो र बेसार मिसाएर पेष्ट बनाउनुस् । यसलाई अनुहारमालगाएर सुक्न दिनुर्प । दुधमा रहेको ल्याक्टिक एसिडले छालाको मृत कोषिकालाई मर्मत गर्छ । मही र उखुको रसमा बेसार मिसाएर पिउने गर्नाले आँखाको मुनीहुने कालो घेरा र चाउरी ठीक हुनछ । उत्कृष्ट प्राकृतिक एन्टिबायोटिकः बेसारमादुधमिसाएर सेवनगर्नाले छाला, पेट र शरीरका अन्यकयौं रोग निको पार्न मद्दत गर्छ । दुधप्राकृतिकप्रतिजैविकभएकाले यसले शरीरको प्राकृतिक संक्रमण रोक्छ । बेसार र दुधदुवै गुणकारी हुन्छ ।
यदियीदुवैलाई एकसाथमिसाएर सेवनगर्नाले डबल फाइदा हुन्छ । गर्मीमा एक चौथाई चम्चा र जाडोमाआधाचम्चा बेसार मिसाएर एक गिलास दुधमामिसाएर पिउनाले लाभदायी हुन्छ । दिनहुँ बेसार मिसाइएको दुधपिउनाले शरीरमापर्याप्तमात्रामाक्याल्सियमप्राप्त हुन्छ । हड्डी स्वस्थ हुन्छ । यसबाट ओष्टियोपोरोसिसका रोगीलाई फाइदा हुन्छ । (नयाँ पुस्ता बाट सभार)
हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !! आज बुधबार चम्किदैछ यी ७ राशिको भाग्य, तपाईको कुन ?